Ampitomboy ny fahafaha-mikaroka tranokala ao anaty WordPress miaraka amin'i Jetpack's Advanced Search | Martech Zone
Ampitomboy ny fahafaha-mitady ao anaty tranokala WordPress miaraka amin'ny Fikarohana farany nataon'i Jetpack
Alatsinainy, Novambra 9, 2020 Alatsinainy, Novambra 9, 2020 Douglas Karr
Ny fihetsika fizahana amin'ny mpanjifa sy ny orinasa dia miova hatrany -tena hanompo ary mikaroha ny fampahalalana ilainy nefa tsy mifandray amin'ny orinasanao mihitsy. Raha ny taxonomies, ny mofomamy, ny atiny mifandraika ary ny famolavolana dia singa mampifandray mpampiasa manampy azy ireo fikarohana ao anaty tranokala matetika no tsy jerena.
Fikarohana tranokala WordPress
Na dia nanana fikirakirana anatiny aza ny WordPress hatramin'ny nanombohany, dia miankina betsaka amin'ny fahaizan'ny tonian-dahatsoratra ny manatsara ny lohanteny, ny sokajy, ny tag ary ny atiny.
Afaka mampiditra olan'ny traikefa anefa izany. Raha manatsara ny fikarohana ao anaty ianao ary mety hahafoana ny firotsahana amin'ny atiny. Manatsara ny mpamaky ary azonao atao ny mamoy ny marina amin'ny fikarohana ao anaty WordPress. Ary raha mampiasa Woocommerce ianao, dia midika izany fa very varotra ianao.
Ny olona ao amin'ny tranokala eCommerce dia 2x mety kokoa hividy zavatra rehefa mitady izy ireo
Fikarohana tranokala mandroso Jetpack
Ny orinasan'ny WordPress dia manohy manolotra serivisy karama sy add-ons, miaraka amin'ny iray amin'ireo plugins malaza kokoa Jetpack. Jetpack dia plugin mahafinaritra izay azo ampiasaina hitahirizana ny tranokalanao, hampitombo ny hafainganan'ny tranonkalanao, hanatsara ny fahaizan'ny tranokalanao ary hitaterana izany miaraka amina fonosana fanadihadiana matanjaka.
Angamba ny iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra dia Fikarohana Jetpack… Fanatsarana mahafinaritra ny fahafahan'ny fikarohana ao amin'ny WordPress manome hery ny mpampiasa amin'ny laharam-pahamehana, ny sivana ary ny fanasokajiana fikarohana ny paositra, pejy, ny vokatra ary ny karazana paositra hafa. Anisan'izany ny:
Valiny tena misy ifandraisany amin'ny algorithman maoderina
Valiny avoakan'ny laharam-pahamehana sy laharam-pahamehana mifototra amin'ny statin'ny tranonkalanao
Fikarohana sy sivana eo no ho eo nefa tsy averinao indray ny pejy
Fikarohana voasivana sy amin'ny endriny (amin'ny alàlan'ny tag, sokajy, daty, taxonomie mahazatra ary karazana post)
Fanatsarana ny lohahevitra mifanaraka amin'ny birao sy amin'ny finday
Fanondroana fotoana tena izy, noho izany ny fanondroana ny fikarohana dia havaozina ao anatin'ny minitra vitsy an'ny fanovana ny tranokalanao
Fanohanana ho an'ny fiteny rehetra, ary fandalinana fiteny mandroso ho an'ny fiteny 29
Teny fikarohana misongadina momba ny hevitra sy ny atiny fandefasana
Fanitsiana ny tsipelina haingana sy marina
Raha afaka mahazo ny valiny tadiaviny haingana ny olona nefa tsy mila mandefa mailaka amiko, dia volamena madio izy io ary manamora ny asako izany. Ataoko dokambarotra izany amin'ny fifampidinihan'ny mpanjifa ary miteny amin'ny olona hampiasa azy aho satria tena mandeha izy io.
Kylie Mawdsley, Mpanolo-tsaina momba ny endrika anatiny, Kylie M. Interiors
Nanavao ny fikarohana ny tranokalanay tamin'ny Martech Zone mampiditra Fikarohana Jetpack mba ho hitanao samirery fa tsara lavitra noho izany ny traikefan'ny mpampiasa. Ireo mpampiasa dia afaka manova ny laharam-pahamehan'ny valiny amin'ny alàlan'ny maha-zava-dehibe na ny taonan'ny lahatsoratra. Na, azon'izy ireo atao ny manivana ny valiny mifototra amin'ny sokajy, tag, na ny taona namoahana azy.
Ny mpandrindra dia afaka manamboatra ny fifandraisana anatiny sy ny endriny amin'ny safidy maromaro:
Mametraka ny filaharana misy ny karazan-dahatsoratra mifanaraka amin'ny zava-misy, vaovao indrindra na tranainy indrindra.
Fahafahana lohahevitra maizina na maivana.
Manokatra takelaka fampidirana rehefa manomboka manoratra ny mpampiasa na rehefa manindry ny fikarohana izy ireo.
Fahaizana manilika lahatsoratra, pejy, karazan-doka mahazatra na media.
Fahaizana misafidy amin'ny endrika samihafa.
Fahaizana manova ny opacity any ambadika amin'ny overlay.
Fahafahana manova ny loko misongadin'ireo teny fikarohana hita ao amin'ny valin'ny karoka.
Jetpack Search dia fanavaozana karama izay azo vidiana misaraka na atambatra amin'ny fonosana Jetpack ankapobeny.
Hanatsarana ny fikarohana an'i Jetpack
Fialana andraikitra: mpiara-miasa aminay i Fikarohana Jetpack.
Tags: Jetpackjetpack plugintranonkala fikarohanaWordPressplugin WordPressplugins wordpressfikarohana tranokala wordpress
Inona ny atao hoe Netnography?
Torolàlana ho an'ny famolavolana resaka ho an'ny chatbot anao - Avy amin'ny Landbot